ညီလင်းသစ်: သားကလေးရဲ့ One Man Show
Posted by ညီလင်းသစ် au 7.4.09
အစ်ကို ဟုတ်ပါတယ် များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့ ငယ်ဘ၀ကဆို တားဆီးပိတ်ပင်ခံရတာများပါတယ်။ ကလေးမကိုင်ရဘူး ကလေးပဲရှိသေးတယ် ကလေးနဲ့ဘာဆိုင်လဲ သွား...ဝေးဝေးမှာနေဆိုတာနဲ့ လေ့လာစူစမ်းစိတ်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ မေးမြန်းမှုတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ကလည်း ငယ်သေးတယ် သိခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ ကျနော်တော့ ပိတ်ပင်တားဆီးတာထက် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှင်းပြတာက ကလေးတွေကို ပိုတိုးတက်ထက်မြက်စေမယ် ထင်မိတယ်။ မှန်ချင်လည်း မှန်နိုင်သလို မှားချင်လည်း မှားနိုင်တယ်နော်....
One Boy Show.. ငယ်ငယ်ကတော့ ဟိုဟာမကိုင်ရဘူး ဒီဟာမကိုင်ရဘူး ပြီးတော့လူကြီးတွေကို ကြောက်ရတော့ ကွယ်ရာမှာတောင်မစူးစမ်းဖြစ်ဘူး..။ သားလေးကြီးလာရင်တော့ နာမည်ကျော် Musician ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..။
ကလေးတယောက်ရဲ့စူးစမ်းချင်စိတ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ လမ်းဖွင့်ပေးထားတာဟာ မိဘတွေရဲ့အကောင်းဆုံး လုပ်ရပ် တခုပါ။ အကို့ သားလေးက အခုကတည်းက ဂီတနဲ့ရင်းနှီးနေပြီနော်။ :)
သားကလေးကိုကြည့်သွားပြီး ရင်ထဲက စကားတွေ ပြောခဲ့တယ်။
ကလေးက ချစ်စရား)
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ...မှန်တာပေါ့ဗျာ၊ ကလေးတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ်နဲ့ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ပြီး တွေးခေါ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊
ဟုတ်တယ်ကိုဖြိုးရ....ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ ဒီဟာမကိုင်ရ ဆိုတာတွေ များလာတဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်မှာ သူ့သဘောနဲ့သူ စူးစမ်းချင်စိတ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွား တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုတွေလုပ်ရင် လူကြီးတွေမကြိုက် တာကိုလုပ်တဲ့အတွက် အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ သူထင်သွား ရော၊ ဒါနဲ့ကပ်လျက် ပါလာတာကတော့ ကြောက်စိတ် ပေါ့၊
ကိုနေညိုရင့်ရေ...သားက ဂီတဆိုတာထက် သူ့အဖေလုပ်သလို လိုက်လုပ်ရလို့ ပျော်နေတာက ပိုပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်ခွင့်ရ တဲ့အခါတိုင်း သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူကျေ နပ်စိတ်တွေကို ကျနော်သတိထားမိတယ်၊
အဲဒီစကားတွေကို ကျနော်မကြားရပေမယ့် ကျေးဇူးပါ မခင်ဦးမေ.... :)
Nice pics. Cute baby :)
How are sigma lenses?
ချစ်စရာလေး...ဘယ်အချိန်လာကြည့်ကြည့်ပါပဲ။ ကလေးက သင်ပေးထားတာတွေ နားလည်တတ်ပြီလားဟင်။ အဖေတူလို့ ဥာဏ်ကောင်းတာဖြစ်မယ်နော်။
အမတုန်းကတော့ သားကြီးကို ကလေးဂစ်တာလေး တလက် ၀ယ်ပေးထားလိုက်တယ်.. မဟုတ်ရင် ဂစ်တာပေးပေးထားရမှာစိုးလို့ ...အေးရော :D
Hello Mae...Thanks for your comment!
Well...Sigma lenses are pretty good. They work efficiently in sharpness, bokeh and have nice optical quality, too. As they are third-party lenses, they don't seem to be as good and precise as those from Canon and Nikon for some focal ranges. But, they have often very interesting quality-price ratio which is considerable.
မယုဝရီရေ...ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကလေးက ကျနော်တို့ပြော သမျှကိုတော့ လိုက်ပြောတဲ့အဆင့်တော့ ရောက်ပါပြီ၊ မပီကလာပီကလာ ပေါ့ဗျာ၊ အင်း..မယုဝရီကိုတော့ မုန့်ကျွေးရတော့မယ်ထင်တယ်...အဟဲ၊ :)
ဟုတ်တယ်အမ မေငြိမ်းရေ့...ကျနော်လည်းအဲဒါပဲ စဉ်းစားနေတာ၊ သူ နဲနဲကြီးလာရင်တော့ အဲဒီလိုပဲ လုပ်မှပဲ :D
လုပ်ချင်တာ ပေးလုပ်ပလိုက်။ :D
ကြီးလာတဲ့အထိ သားက ဂီတကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့ စိတ်မပူုရတော့ဘူးပေါ့ နော့် အစ်ကို ဂီတကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်က အေးချမ်းတယ်လို့ ညီတော့ထင်တယ် ဆိုတော့ သားက အလိမ်မာတုံးလေးဖြစ်မှာပါ ။
အပေါ်က ကျနော်ဗျး)
အင်း..လောလောဆယ်တော့ သူက သိပ်စိတ်မဝင်စား ပြန်ဘူး၊ ကျနော် ဂစ်တာတီးရင် သူက ဟာမိုနီကာ မှုတ် ဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတယ်၊ ဂစ်တာလိုလည်း မခက်တဲ့အပြင် သူ့ဟာမိုနီကာ အသံက ဂစ်တာသံကို ကျော်ကျော် သွားတော့ သူက ပျော်နေတာ...၊ နောက်ကျရင်တော့ ဘယ်လိုလာမလဲ မသိပါဘူးဗျာ...။
ချစ်စရာ သားငယ်လေးကို ကြည့်သွားတယ်..
အခုကော သူ ဘာတွေ လုပ်ချင်နေသေးလဲ
ကလေးကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာလေး သဘောကျတယ် :)